DAAWO: M/weynaha Somaliland oo kulan deg deg ah la yeeshay Cirro & Waraabe, Maxayse ka wada hadleen? – Puntlandtimes
DAAWO: M/weynaha Somaliland oo kulan deg deg ah la yeeshay Cirro & Waraabe, Maxayse ka wada hadleen?
HARGEYSA(P-TIMES)- Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan deg deg ah la yeeshay Horjoogayaasha Xisbiyada Mucaaradka ee WADANI & UCID oo ay ka wada hadleen arrimaha xasaasiga ah ee waqtigan taagan, gaar ahaana Dekeda Berbera iyo xaaladda gobalka Sool oo ay isku hayaan Puntland.
Madaxtooyada Somaliland ayaa sheegtay in kulankan diiradda lagu saaray wadatashi iyo sidii mawqif mideysan looga qaadan lahaa xaaladdaha ka aloosan dhinacyada Berbera iyo wada hadalada Soomaaliya iyo maamulka Somaliland.
War laga soo saaray Madaxtooyada Hargeysa ayaa lagu sheegay in ay sadexda Xisbi isla qireen sida ay waajibka utahay in la dhawro madax banaanida maamulkooda, isla markaasna ay qaraar cad ka qaadan doonaan la hadalka dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Afhayeenka Madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in ay sadexda siyaasi ugu baaqeen Shacabka Somaliland in ay dagaal u diyaar garoobaan oo ay difaacaan dalkooda, taas oo ka dhigan war kale oo dhiilo galinaya Shacabka Soomaaliyeed.